आख्यान-गैरआख्यान Archives | साहित्यपोस्ट
जोसेफ कोन्राड र समरसेट ममका रचना पढेपछि तिनका रोमाञ्चकारी पात्र खोज्दै विश्वयात्रामा निस्केका अमेरिकी लेखक हेराल्ड स्टिफन्सले काठमाडौँको होटल याक एन्ड यतीमा सन् १९६१ मा भेटेका एक हिरो थिए, बोरिस लिसानेभिच । स्टिफन्सको पुस्तक 'एसियन…
कथाः दुखनियाँ र लाटोकोसेरो
साउन–भदौको महिना । कतै धान पसाउँदै थिए, कतै धानका बाला झुलेका थिए । यता मकैबारीमा मकैमा दाना लाग्दैथ्यो । जब मकै खान लायक भयो । बगालका बगाल चराहरू आउन थाले र मकै खाएर सताउन थाले । चराहरूको रखवारी गर्नका लागि जिउबुझ्ना बारीको एक…
‘आज बाहिर नगए हुन्थ्यो ?’ भात पस्किँदै कृपा अत्यन्त मसिनो स्वरमा विवेकलाई आग्रह बिसाउँछिन् । यद्यपि विवेकको जवाफ अपेक्षित हुन्छ । उनी उभिएकी छन् भने विवेक कुर्सीमा बसी डाइनिङ टेबुलमाथि राखेको थालीमा भात सपासप हसुर्दै छ । परिकारमा उसलाई…
कथाः मैले लेख्न नसकेको कथा
म एउटा कथा लेख्न चाहन्थेँ। आफ्नो सानो र सुखी जिन्दगीको । तर यो कथा मेरो मनबाट कागजमा उत्रिन पाएन। मसँगै उसको पनि अन्त्य भयो। -- मलाई रूखाखोकी लागिरहन्छ र यसलाई म सामान्य बिरामीका रूपमा लिन्छु। तर कहिलेकाहीँ यसले निकै सताउँछ। धेरै लामो…
नेपाल, एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा समेत विकासको तल्लो खुट्किलोमा बामे सरिरहेको छ । कुनै पनि देश विकसित नहुनु भनेको कर्मशील नागरिकको अभाव हुनु हो । या त कर्ममा भन्दा भाग्यमा बढी विश्वास गर्ने मानिसहरुको संख्या नघट्नु हो । भाग्यवादलाई…
रचनात्मक कसरी रहने?
रचनात्मक अथवा सृजनशील व्यक्तिहरु जीवन र कार्यक्षेत्रमा सफल हुन्छन्। उनीहरुका लागि अवसरको ढोकाहरू सधैँ खुला रहन्छन्। उनीहरुसँग हरकोही सहकार्य गर्न चाहन्छन्। भनाइको तात्पर्य, उनीहरुलाई कहिल्यै बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आइपर्दैन। अधिकांश…
गाँजाको बारीमा एउटा गाँजाको बोट अलिक भिन्न हुन्छ रे ! फूल पनि भिन्नै फुल्छ रे ! पर्पल रङको, त्यसैलाई पर्पल हेज भन्छन् । हामी पनि पर्पल हेज जस्तै बन्नुपर्छ अलिक पृथक् । यिनै विचारहरुलाई अभिव्यक्ति दिएका छन्, आशीष जङ्गले आफ्नो कृति पर्पल…
उमा सुवेदी नेपाली साहित्यमा परिचय गराइराख्नु पर्ने नाम होइन । 'तोदा' र 'इती'जस्ता सफल उपन्यासकी लेखक सुवेदीको अर्को आख्यानात्मक कृतिका रुपमा 'सयौं पुतली' आएको हो । यो कथा संगालो हो । त्यसो त पहिला नै उहाँको गजल संग्रह प्रकाशित भइसकेको छ…
123 … 18 पछिल्लो